Kalfadhigii 2-aad ee Aqalka sare oo maanta lasoo xiray – Kalfadhi
Kalfadhigii 2-aad ee Aqalka sare oo maanta lasoo xiray
Kalfadhigii 2-aad ee xubnaha Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaana si rasmi ah u soo xiray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi. Kulanka waxaa sidoo kale lagu dhegeystay warbixinta xiisadda ka taagan degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Guddoomiyaha ayaa khudbaddiisa uga hadlay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka Soomaaliya.
Xildhibaan Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) oo ka mid ahaa wafdigii xaqiiqo-raadinta ahaa ee Beled-xaawo ku weheliyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdi Faarax Juxa ayaa mudaneyaasha u jeediyay waxyaabihii ay soo arkeen. Wuxuu sheegay in 790 guri oo shacab Soomaali ah ay deggan yihiin ay hadda mareen dhinaca Kenya marka loo eego dhismaha darbiga.
Xildhibaanka ayaa xusay in ay la kulmeen shacabka Beled-Xaawo oo si weyn uga dhiidhinaya falka ay ku kacayso Kenya, isagoo sanatarrada xusuusiyay in arrintaan aysan mudneyn in laga aamuso.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa tilmaamay in damaca Kenya uusan aheyn mid hadda billowday, balse uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Sanadkii 2009-kii ayuu sheegay in mar la sameeyay isku day Baarlamaankii KMG ahaa looga ansixin rabay heshiiskii is-garadka ahaa ee ay kala saxiixdeen labada dowladood, balse baarlaamka uu ku gacan seyray. Heshiiskaas wuxuu ku saabsanaa muranka badda ee weli ay arrintiisa taagan tahay.
Waxyaabaha soo cel celinaya in Kenya ay damac dheeraad ah u yeelato darbiga ay ka dhiseyso soohdinta Soomaaliya ay la wadaagto ayuu ku sheegay in ay uga golleedahay sidii ay badda Soomaaliya ee dacwaddeeda ay furan tahay ula soo simi lahayd darbiga, si ay u sheegato in iyadu ay leedahay.
Wuxuu xusay in dalka difaaciisa ay masuuliyad ka saaran tahay dowladda iyo shacabka, wuxuuna dalbaday in midnimo lagu wajaho arrintan. Taas ayuu u arkaa xalka ugu sahlan ee lagu baabi’in karo hamiga Kenya ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha ayaa ku dhawaaqay in uu xiran yahay kalfadhigii 2-aad ee Aqalka Sare. Wuxuu xaqiijiyay inay jiri doonto xaflad weyn oo munaasabadda xiritaanka la xiriirta.
Marka la is barbar dhigo fadhiyada ay yeesheen Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare waxaa shaqo badan qabtay Golaha shacabka oo fadhiistay 49 halka aqalka sarena uu fadhi yeeshay 23 jeer.
Aqalka sare ayaa kalfadhigaan ku oggolaaday miisaaniyadda Dowladda Soomaaliya ee 2018-ka.
Muxuu yahay mooshin?
Kursigii xildhibaannimo ee Sanbaloolshe oo loo tartami doono